Madaxweyne Siilaanyo Oo Naqdiyey Qoddob Indhaha Ka Lalliyey Qaddiyada Somaliland Oo Lagu Xusay War-murtiyeed Ay Xubnaha IGAD Xalay Kasoo Saareen Magaallada Xamar | Hubaal Media	Home
HUBAALMEDIA.COM Madaxweyne Siilaanyo Oo Naqdiyey Qoddob Indhaha Ka Lalliyey Qaddiyada Somaliland Oo Lagu Xusay War-murtiyeed Ay Xubnaha IGAD Xalay Kasoo Saareen Magaallada Xamar
AKHRI Farriinta Ay Xambaarsanayd Khudbad uu Madaxweynuhu Ka Jeediyey Kulan Degdeg Ah Oo Xalay uu Isugu Yeedhay Guddida Aqoonsi raadinta Somaliland “Waxaan ku martiqaadayaa Dalalka Midowga Africa in ay Somaliland u soo diraan Guddi Xaqiiqo Raadis ah oo ka gun gaadha rabitaanka Shacbiga iyo sharciyadda ay ku dhisan tahay Dal ahaan, siday u waafaqsantahay Axdi-qarameedka Xuduudaha Qaaradda Afrika” ++++++++++
“Waxaanu Maag Qaawan U Aragnaa, In Magaca Qarankayaga Loo Cumaammado Cid Aan Shacbi-Weynaha Somaliland Ceelalyo U Diran, Isla Markaana Aanay Metelin Shaqsiyaadka Muqdisho Laga Cugtay”
“Waxaanu Cambaaraynayna War-Murtiyeedka Ka Soo Baxay Shirka Madaxda IGAD Ee Ka Dhacay Muqdisho, Gaar Ahaan Qodobka Ka Hadlaya….”
Hargeysa (Hubaal) – Dawladda Jamhuuriyadda Somaliland ayaa jawaab adag ka bixisay qoddobada uu xambaarsanaa war-murtiyeed gacan ku rimis ah oo isla xalay laga soo saaray gebogebada shir hoggaamiyeyaasha dalalka IGAD uga socday magaallada Muqdisho ee dalka Soomaaliya kaasi oo qaybo kamid ahi indhaha ka lallinayeen xaqiiqadda dhabta ah ee mandaqadda taalla iyo qaddiyadda/qarannimada dalkan Somaliland.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland oo kulan degdeg ah xalay isugu yeedhay guddida heer qaran ee ictiraaf raadinta Somaliland ayaa cambaareeyey qoddobada laga soo saaray shirka IGAD oo uu sheegay in uu yahay mid aan ka turjumayn xaqiiqada jirta isla markaana marin habaabinaya sida runtu tahay. Madaxweynuhu waxaa uu sheegay in qaran ahaan ay Somaliland tahay gooni isu taageedu mid muqadas ah oo lama taabtaan ah, taasi bedelkeedana ay beesha caalamka u cadaynaynaan in shakhsiyaadka Xamar u shaqo tegey aanay metelin JSL.
Kulanka Xalay uu Madaxweynuhu la yeeshay xubnaha guddida ictiraaf raadinta waxaa uu hoosta ka xariiqay in lays xaq dhawro oo ay shacbiga Somaliland Ixtiraam ka mudan yihiin dunida inteeda kale.
Sidaasna waxaa lagu sheegey war-saxaafadeed xalay ka soo baxay xafiiska Afhayeenka iyo warbaahinta aqalka Madaxtooyada. War-saxaafadeedkan oo nuqul kamid ahi soo gaadhay Wargeyska HUBAAL, waxaa uu u dhignaa sidan:
“Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Axmed Maxamed Silaanyo waxa uu caawa [xalay] qasriga Madaxtooyada kulan casho sharaf ah kula yeeshay Guddida Ictiraaf Raadiska Jamhuuriyadda Somaliland. Ujeedada kulan ayaa xambaarsan dardar gelinta iyo dedaalka ay guddidu ugu jirto ka midho dhalinta himilada qaranka Jamhuuriyadda Somaliland ka sugaayo beesha caalamka, taasoo loo igmaday inay si gaara uga shaqeeyaan guddidaasi, sidoo kalena waxa uu madaxweynuhu fursadaasi uga faa’iidaystay kuna cambaaraynayay war-murtiyeedka ka soo baxay Shirka Madaxda IGAD ee ka dhacay Magaalada Muqdisho, gaar ahaan Qodobka ka hadlaya Midnimada Somalia, waxaanu madaxweynuhu khudbadiisa ku yidhi:
Sida aynu la wada soconno, waxa Caasimadda Dalka Somalia lagu qabtay maanta [shalay] Shir Sannadeedkii, Urur Goboleedka ay ku Bahoobeen Dalalka Bariga Africa ee IGAD. Ugu horreyn, waanu soo dhawaynaynaa in Shirkaasi ka dhaco magaalada Muqdisho, waxaanu u aragnaa tallaabo geesinimo leh oo hore loo qaaday. Dawladda Somaliland waxay soo dhawaynaysa dedaalka ay ugu jirto beesha caalamka iyo dalalka Midowga Africa sidii nabad loogu soo dabbaali lahaa Dalka Somalia, isla markaana loogu dhisi lahaa Dawlad adag oo hanata xilka iyo masuuliyadda saaran.
Somaliland waa waddan isaga oo xor ah, waddan kale oo xor ah ku biiray, ma’aha markii ugu horreysay oo laba waddan oo Qaaradda Africa ka mid ahi isku darsadeen, haddana kala noqdeen.
Shacbi-waynaha Somaliland waxay si cad %53 ku diideen June, 1961-kii aftidii loo qaaday dastuurkii cusbaa ee loo sameeyey dalkii lagu midoobay ee la magac baxay Jamhuuriyaddii Soomaaliya, oo haatan meesha ka baxday.
Somaliland rubuc qarnigii u dambeeyey kama qayb qaadan shirarkii kala duwanaa ee dib u heshiisiinta Soomaaliya marnaba, maantana qayb kama nihin Shirarka Somalia Dawladda loogu dhisayo.
Maaha markii u horreysay ee Dadka Somaliland dareenkooda iyo rabitaankooda muujiyaan, Shacbiga Somaliland waxay bishii May, 2001-dii kalsooni cod buuxa %97.7 ku taageereen aftidii loo qaaday dastuurka cusub ee Jamhuuriyadda Somaliland iyo Qadiyadda Gooni-isu-taaga dalka.
Somaliland waa dal buuxiyey dhammaan shuruudihii looga baahnaa wadan madax-bannaan, oo leh Dawlad (Xukuumad iyo Baarlamaan sifo dimuqraadiya loo doortay), Xuduud Sugan oo Caalamiy ah, Cumlad iyo Calan u gaar ah.
Madax-bannaanida Jamhuuriyadda Somaliland waa mid lama taabtaan ah, mana jiro haba yaraatee hammi iyo himilo salka ku haysa in dib loola midoobo Dalkii aanu ka go’nay ee Somalia.
in ay meel uga soo wada jeestaan ilaalinta qarannimadooda iyo qadiyaddooda.